अनेकौं चुनौतिका बाबजुत पनि आधुनिक प्रविधियुक्त बन्दै आयल निगम « Amsanchar
अनेकौं चुनौतिका बाबजुत पनि आधुनिक प्रविधियुक्त बन्दै आयल निगम
काठमाडौँ, २१ असोज । नेपाल आयल निगम विभिन्न चुनौतिका बाबजुत पनि आधुनिक प्रविधिमैत्री बन्दै गइरहेको छ ।
आधुनिक प्रविधियुक्त पम्प मध्येको नेपाल आयल निगमको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको भैरहवा पेट्रोल पम्प पनि एक हो । यो गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनसँगै पम्पले २४ सैं घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्यका सथा हाल विहान ६ बजेदेखि बेलुका १० बजेसम्म सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । दुई करोड ७१ लाखको लागतमा निर्माण गरिएको उक्त पम्प ८.५ कठ्ठा क्षेत्रफलमा रहेको निर्माण गरिएको छ । उक्त पम्पको आधुनिक प्रविधियुक्त पम्पका रुपमा उद्योगमन्त्री मातृका यादवले साउन १७ गते उद्घाटन गर्नुभएको थियो । पेटोल पम्पहरु समान्यतया आगलागीको उच्च जोखिम मानिन्छ तर यो पम्पमा आगलागीको उच्च जोखिम रहेको छैन । आगलागीको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आगलागी नियन्त्रणका लागि सौर्य उर्जाको माध्यमबाट आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ । जसका कारण आगलागीको सम्भावना अत्याधिक न्युन हुन्छ ।
उक्त पम्पले प्रतिघण्टा करिव ९ हजार ६ सय पेट्रोल र ९ हजार ६ सय डिजेल डेलिभरी दिई विक्रि वितरण गर्न सक्छ । पम्पले घामपानीबाट बचाउन पेट्रोलियम उपभोक्ताहरुलाई बचाउन ९ सय वर्गमिटरको क्षेत्रफल भएको अग्नी प्रतिरोधक एलुमिनियम कम्पोजिट पदार्थबाट छाना निर्माण गरेको छ । यसले पम्प परिसर भित्र अग्नी नियन्त्रणको लागि २ वटा ७० केजी र ८ वटा १० केजी क्षमताको ड्राई केमिकल पाउडर सहितको फायर एक्टिङ्गुसरको व्यवस्था गरेको छ ।
२०३७ सालदेखी निरन्तर रुपमा सञ्चालनमा रहेको उक्त पेट्रोल पम्पमा कुनै पनि ग्राहकले आफ्नो सवारी नं.को मसिनमा दर्ता गरेपछि आफुनो सवारी साधनमा प्रयोग गरेको पेट्रोलियम पदार्थको विल विद्युतिय माध्यमबाट सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसमा नत हिसाव गर्न झन्झट नै हुन्छ, नत हिसाव गर्ने व्यक्ति नै आवश्यक हुन्छ ।
उक्त पम्पका प्रमुख राजन नेपालका अनुसार उक्त पेट्रोल पम्प नेपालकै नमुना पेट्रल पम्प रहेको र त्यसमा जम्मा ३२ हजार पेट्रोल ४८ हजार डिजेलको भण्डार गर्ने क्षमता रहेको छ । आगामी निकट भविष्यमा नै प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा पम्प सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसै क्रममा नेपालगञ्जमा आफ्नै जग्गामा उक्त पम्प जस्तै नेपाल आयल निगमकै स्वामित्वमा रहने गरी आधुनीक नमुना पेट्रोल पम्प निर्माण गर्ने प्रकृया अघि बढाइएको समेत जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै नेपाल आयल निगमकै रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. ७ मा करिव ५ विगाहा क्षेत्रफल रहेको प्रदेश नं. ५ को प्रादेशीक कार्यालयले हाल ८ वटा जिल्लाहरुमा आफ्नो सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । हाल उक्त पम्प भैरहवामा एघार कठ्ठा क्षेत्रफलमा सञ्चालमा रहेको छ भने हवाई इन्धन डिपो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जग्गा भाडामा लिई सञ्चालनमा रहेको छ ।
प्रादेशीक कार्यालयको भण्डार क्षमता पनि दयनीय रहेको छ । दैनिक रुपमा पेट्रोल करिव दुई सय ५० किली, डिजल करिव ११ हजार किली, मट्टीतेल करिव २४ सय किली तथा हवाई इन्धन करिव एक सय ४० किली खपत हुने गर्दछ । तर उक्त कार्यालयको भण्डार क्षमता पेट्रोल एक सय ४० किली, डिजल तीन हजार किली, मट्टीतेल करिव चार सय तथा हवाई इन्धन ७६ किलीमात्र दैनिक क्षमता रहेको छ ।
प्रादेशीक कार्यालयमा हाल अधिकृत स्तरका ९ जना र सहायक स्तरका २९ जना कर्मचारीले प्रादेशीक कार्यालय सञ्चालन गर्न बाध्य भएका छन् । आवश्यकमात्रामा जनशक्ति नहुनु उक्त कार्यालयको एक महत्वपूर्ण समस्या रहेको छ । त्यस्तै आवश्यक मात्रामा भण्डार नहुनु अर्को महत्वपूर्ण समस्याको रुपमा रहेको छ । उक्त स्थानमा वर्तमान समयमा करिव दुई दिन मात्र थेग्न सक्ने भण्डार क्षमता रहेको बताइएको छ । जसमा अहिलेको अपरिहार्यता भनेका करिव ३० हजार केएल भण्डार क्षमता हुनुपर्ने देखिएको बताइएको छ ।
उक्त भण्डारमा भारतको बैतालपुर डिपो, मुगलसराय टर्मिनल र गोन्डा डिपोबाट आयत गरिन्छ । जसमा नेपालको अमलेखगञ्जबाट ल्याउने प्रयास गरिएता पनि आवश्यक मात्रामा नपुग्ने भएकाले भारतका डिपोहरुबाट ल्याउनुको अर्को कुनै विकल्प नभएको प्रादेशीक कार्यालयका प्रमुख ई. सुरज शाहले बताउनुभयो । उक्त कार्यालयमा भारतको मथुरा, बरौनी, हल्दिया, कर्नाल र पारादिप रिपाइनरी गरी एलपी ग्यास आयाल गर्ने गरिएको जसमा मासिक करिव ४५ सय मे.टन आयात गरिने प्रमुख ई. शाहले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त कार्यालयको मातहतमा २ सय ६५ वटा आइओसी तथा ५८ वटा नीजि ढुवानी सेवा प्रवाह गरिरहेको सहायक प्रमुख शैलेस भुसालले जानकारी गराउनुभयो । त्यस्तै उहाँले उक्त कार्यालयबाट रुपन्देहीमा १५८, नवलपरासीमा ५०, कपिलबस्तुमा ७४, पाल्पामा १०, स्याङ्जामा १२, गुल्मीमा ५, अर्धाखाँचीमा ८ र बाग्लुङमा १ गरी जम्मा ३१८ वटा पम्पमा ढुवानी गर्ने गरेको जानकारी गराउनुभयो ।